Izalathiso zemarike yaseSpain: yokutyala imali | Ezezimali
Izabelo zeSpanish aziphelelanga nje Ibex 35, njengokuba abanye abatyali mali abancinci nabaphakathi banokucinga ngalo mzuzu. Kukho ezinye ii-indices ezingaziwayo ezinokuthi zibe yimicimbi yokusebenza kwethu ukusukela ngoku. Ezinye zazo zichaphazeleka kakhulu, nangona ezinye zingaziwa kakhulu kwinxalenye elungileyo yabasindisi. Siza kukubonisa zonke ukuze ube kwimeko yokwandisa izicwangciso zakho kwicandelo lotyalo-mali, ngaphandle kokuzikhawulela kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zamazwe.
Kuzo zonke unokufumana amathuba okwenene eshishini okoko umahluko ophambili wokuba le mithombo yesalathiso semarike yemasheya ikhoyo yile ivolumu yokurhweba thaca ngokhuseleko oludweliswe apho. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Kwimeko nayiphi na into, baya kusebenza ukufikelela kwisigqibo esichanekileyo kwaye oko kukuba kukho ubomi ngaphaya kwe-Ibex 35 njengoko uza kubona ngomzuzwana.
Oku akuthethi ukuba owona mthombo wesalathiso kwimarike yaseSpain yi-Ibex 35. Njengakwilizwekazi elidala kunye I-CAC 40, i-DAX okanye i-FTSE 50. Apho ezinye zeenkampani ezidweliswe kakuhle emhlabeni zidityanisiwe. Kwaye nakweyiphi na imeko bakwenza isalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseYurophu, oko kubizwa ngokuba yi-Eurostoxx 50. Ngokubakho kwezinye zezona zitokhwe zibalaseleyo kwimarike yesizwe, njengeSantander, i-BBVA okanye i-Iberdrola ukubiza nje imizekelo embalwa. .
1 Ibex 35: iklabhu ekhethiweyo kwimarike yemasheya
2 Imarike yaseSpain eqhubekayo
3 Ibex iminqwazi emincinci
4 Ibex iminqwazi ephakathi
5 Enye indlela yokuThengisa
6 ILatibex, intengiso yemasheya yaseSpain
Ibex 35: iklabhu ekhethiweyo kwimarike yemasheya
Ibex 35 kulapho iinkampani ezingama-35 ezilungileyo ezidweliswe kwiimarike zezemali zidityanisiweyo. Ngobukho be phantse onke amacandelo oshishino: iibhanki, iinkampani zokwakha, iinkampani zombane, unxibelelwano, iinqwelomoya, njl. Zizo zonke iimeko iinkampani ezinkulu ezenza imali kwaye le yinto eyahlulahlula kwezinye izinto ezikhuselweyo ezidweliswe kwizalathiso ezingaphantsi okanye ezingaphantsi. Phantse yonke imisebenzi eqhutywa ngabatyali zimali abancinci nabaphakathi ihanjiswe ngolu rhwebo lubalulekileyo kuzwelonke.
Kwelinye icala, kufanele kuqatshelwe ukuba i-Ibex 35 yenye yee-stock indices ezinikezela nge amatyala aphezulu ekusebenzeni. Oko kukuthi, ngekhe kubekho naluphi na uhlobo lweengxaki zokuhlengahlengisa ukuthengwa nokuthengisa amaxabiso kwaye ngenxa yoko awusoze ubanjiswe kwixabiso. Oku kunceda abasebenzisi ukuba bangene kule marike yezemali. Kubukho beenkampani ezibaluleke kakhulu kumazwe aphesheya kwaye zidweliswe nakwezinye iimarike zamashishini zamashishini ezingenanzala emisiweyo. Ngenani elibalulekileyo lokusebenza yonke imihla kwaye ivumela imisebenzi yakho ukuba yenziwe ngokusemthethweni ngokukhawuleza.
Imarike yaseSpain eqhubekayo
Yinkqubo yokutshintshiselana ngesitokhwe e-elektroniki edibanisa abaqhubi bezemali kwiivenkile ezine zaseSpain -Madrid, iBarcelona, ​​iBilbao kunye neValencia- ngendlela evumela ukwenziwa kokuthengwa nokuthengiswa kwemisebenzi yezabelo zalo naliphi na ixabiso elidwelisiweyo nakweyiphi na indawo iqhagamshelwe kwezi marike ibhegi yesizwe. Kukho amaxabiso angaphezu kwe-100 adityanisiweyo, ngakumbi ngalo mzuzu Iinkampani ezili-127 ezivela kumacandelo ngamacandelo zidwelisiwe. Zombini iinkampani ezenza isalathiso sezabelo zokulingana kunye nokukhuseleka okungaphandle kwalo mthombo wesalathiso semarike yemasheya.
Ngayiphi na imeko, yenye yeeparameter apho bonke abatyali mali abancinci nabaphakathi bazibeka ekwenzeni iipotifoliyo zabo zotyalo mali. Ukusuka kwiinkampani ezinje ngenkampani yokwakha i-ACS ukuya kwabanye abanemali encinci efana neSniace ngokukodwa. Ukuze uqonde ngcono, intengiso eqhubekayo yaseSpain yiyo ingxowa exubileyo yemali Spanish. Apho unokufumana khona naluphi na uhlobo lweenkampani, eziphezulu, eziphakathi neziphantsi. Ngaphandle kwendlela abadweliswe ngayo njengecandelo lemarike yemasheya. Ngenxa yokuba, ayithathwa njengecandelo ngokwalo, kodwa ngokuchaseneyo, yenziwe kwinkqubo yokutshintshiselana ngesitokhwe.
Ibex iminqwazi emincinci
Esi sisalathiso esincinci, kodwa esingabalulekanga kangako esihambelana neekepusi ezincinci. Ngamanye amagama, iinkampani ezincinci ezikhoyo kwiimarike ze-equity. Apho ukungazinzi yenye yezona zinto zichaphazela abantu ngakumbi nangaphezulu kokunye ukuthathelwa ingqalelo. Ngamanye amaxesha naphantsi kokuqwalaselwa amaxabiso aqikelelweyo kwaye bahambisa izihloko ezimbalwa kakhulu kwiseshoni nganye yorhwebo. Ukuba yingozi kakhulu ngenxa yeempawu zayo ezikhethekileyo kuba ungashiya i-euro ezininzi endleleni.
Kwelinye icala, le index yee equities zesizwe yenziwa njengenye indlela xa ungenakukwazi ukufaka isalathiso esingundoqo, i-Ibex 35. Ngothotho lwamaxabiso ngokuqinisekileyo awayi kuvakala uqhelekile kuwe okanye ubuncinci kuwe ababazi ubukho bakhe. Le yinto ekhulayo yokwenza imisebenzi kuba awuzukufumana izingqinisiso zokuvavanya ukuba ingaba kufanelekile na ukuba kulungelelaniswe ngokusemthethweni oku kwiimarike zezemali. Yintoni egqithisile, kunqabile ukuba bahlawule izabelo phakathi kwabanini zabelo.
Ibex iminqwazi ephakathi
Sisalathiso esiphakathi apho ungasebenza khona xa kungekho ezinye iindlela kwi-Ibex 35. Ezi zezona nkampani zibaluleke kakhulu ezidwelisiweyo okanye eziya kuthi kamva zibandakanywe kwisalathiso sezabelo zaseSpain ngaphezulu kwesihlandlo esinye. Kwaye ngokungafaniyo neekepisi ezincinci ze-Ibex, amanye amalungu ayo ahambisa izabelo kubatyali mali abathathe izikhundla kukhuseleko lwabo. Omnye wemizekelo uboniswa ngu I-Atresmedia kwaye yinkampani yonxibelelwano eyaba yinxalenye ye-Ibex 35 kungekudala.
Ngelixa ngokuchaseneyo, i-Ibex encinci ifaka iinkampani ezinomthamo owonelisayo weemvumelwano. Ngaphandle kokuba neengxaki zokungena okanye ukuphuma kwiimarike zezemali nokuba. Ngokuqinisekileyo ifana kakhulu ne-Ibex 35 kuzo zonke iindawo zokujonga, kubandakanya neempawu zeenkampani zayo. Ukubunjwa kwayo kuguquguquka Ngaphandle kwezinye izalathiso zesitokhwe kwaye unokufumana iinkampani zalo naluphi na uhlobo ezinokuya kwiqela elibaluleke nangaliphi na ixesha. Ngomnye wemithombo yesalathiso yokuba abatyali zimali abancinci nabaphakathi kufuneka babe semthethweni ukusebenza kwabo.
Enye indlela yokuThengisa
Eyaziwa ngokuba yi-MAB yeyona nto ingaziwayo ngabasebenzisi kwaye kwangaxeshanye iyingozi kakhulu ukwenza imisebenzi kwimarike yesitokhwe. Kungenxa yokuba zenziwe ngokhuseleko olusandula ukwenziwa okanye, okubi nangakumbi, ziinkolelo. Ngokubalulekileyo Umahluko phakathi kwamaxabiso abo aphezulu kunye neyona isezantsi kwaye bajolise kuphela kwiprofayili yomtyalomali echazwe kakuhle: enamava kolu hlobo lokusebenza kwaye ongoyikiyo umngcipheko kolu hlobo lokusebenza kwiimarike ze-equity. Kukho uphononongo oluphezulu kwixabiso labo, kodwa ukuwa kwabo kukwanomtsalane kakhulu.
Kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba enye i-Stock Market iyimakethi ehleliweyo egunyaziswe nguRhulumente waseSpain kwaye phantsi kweliso yiKhomishini kaZwelonke yoThengiso lweNtengiso (CNMV). Ukusuka kolu luvo, inika ukhuseleko kwizenzo zabatyali zimali abancinci nabaphakathi nangona kukholelwa ukuba abanye baba bathunywa banokugcina kwinkqubo yotyalo mali. Ngayiphi na imeko kukho into enye ngokuqinisekileyo kwaye zininzi zeenkampani ongayi kuva ebomini bakho bonke. Akumangalisi ukuba abanye bethengisa kule marike yezemali ixesha elifutshane kakhulu.
ILatibex, intengiso yemasheya yaseSpain
Sijongene nenye yeemarike zokulingana ze-atypical zonke ngenxa yeempawu zayo ezizodwa. ILatibex yimarike yemasheya yokhuseleko lweLatin American esekwe eMadrid kwaye isebenza ukusukela ngeyoMnga ngo-1999. Ilawulwa nguMthetho woKhuseleko lweMarike kwaye iyinxalenye ye-BME. Kuyo unokufumana amaxabiso ale ndawo. Ukusukela IArgentina, iBrazil, iinkampani zaseChile kunye neSpanish. Yenye indlela ethe ngqo yokutyala imali kwizabelo zeSpanishi.
Inenzuzo yokuba unokwenza ukuthengwa kokhuseleko lwaseBrazil okwangoku kukwimeko entle yobuchwephesha. Njengenye yezoqoqosho olusakhulayo olusakhulayo lokutyala imali ukusukela ngoku. Ngeekhomishini ezikumanqanaba afanayo kakhulu kwiimarike zokulingana zikazwelonke. Kwelinye icala, ayinikezeli ngokwahlukileyo xa kuvulwa imakethi yayo okoko iiyure zokuthengisa zale marike zivela ngo-11: 30 ukuya ku-17: 30, ngexesha leSpanish. Le marike ikwabonakaliswa yinto yokuba inawo onke amalungu emarike yaseSpain njengabalamli.
Njengoko sele ubonile, akusafuneki ukuba uye kwi-Ibex 35 ukuze wenze imisebenzi yakho kwiimarike zesizwe. Kodwa ngokuchaseneyo, unokukhetha ngakumbi kunokuba ubucinga kwasekuqaleni. Nokuba ukudibanisa iiasethi zemali zesizwe kunye neLatin American. Ngayiphi na imeko, ngoguqulelo olufanayo phakathi kwazo zonke ii-indices zesitokhwe esizivelisileyo kolu lwazi. Ngaphandle kokushiya imida yethu ukwenza ukonga kunenzuzo ngeendlela zakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Izalathiso zemarike yaseSpain: yokutyala imali